China ALUMINUM SOLID PANEL orinasa sy mpamatsy | Alucosun
Alucosun SOLID® dia alim-baravarankely vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina aliminioma lehibe miaraka amin'ny hateviny isan-karazany sy ny safidim-bidy izay mifanaraka tsara amin'ny rindrambaiko amin'ny endrika tarehy, tafo, valindrihana. Izy io dia raisina ho iray amin'ireo fitafiana maharitra indrindra, azo antoka, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana misy ankehitriny.
Alucosun SOLID ® dia voasokajy ho toy ny facade A1 Resistant Fire nosedraina nanohitra ny EN13501 sy ny faharetany azo avy amin'ny fananana fonosana PVDF miaraka amina loko maro sy famaranana mifanaraka amin'ny karazana fampiharana.
Alucosun SOLID®dia alim-baravarana alimina vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina alimina lehibe misy alim-borona sy safidy maniry tsara mifanaraka amin'ny rindrambaiko alfa, tafo, valindrihana. Izy io dia raisina ho iray amin'ireo fitafiana maharitra indrindra, azo antoka, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana misy ankehitriny.
Alucosun SOLID ® dia sokajiana ho Class A1 Fire Resistant façade notsapaina tamin'ny EN13501 sy ny faharetany azo avy amin'ny fananana fonosana PVDF miaraka amina loko maro sy famaranana mifanaraka amin'ny karazana fampiharana.
Ny hatevin'ny tontonana 2-5mm 2mm, 3mm
sakany 1000-1500mm 1250mm, 1500mm
Length 1000-5800mm 2440mm, 3050mm, 3200mm
Karazana firaka AA 1000, AA 3003, AA 5052 AA 1100, AA 3003
Weight 8.2kg / m2 ho an'ny 3mm
Sakany (mm) 0 hatramin'ny -0.4mm
Halavany (mm) ± 3mm
Matevina (mm) ± 0.2mm
Fahasamihafana tsipika diagonaly (mm) ≤5mm
Fahitsian'ny sisiny (mm ≤1mm
Fananana mekanika sy ara-batana
Vokatry ny tensile 165 MPa
Elongation @ Fiatoana 1-4%
Modulus ny elastika 68.9 GPa
Herin'ny herinaratra 110 MPa
Fitondra-tena mafana 154 W / mk
Teboka mitsonika 643 - 654 C
Temperature Annealing 413 C
Gravity manokana 2,73 G / C
Coating Pvdf Aluminium matevina
S.No masontsivana Unit Fitsipika fenitra Result
1 Coating Type - - Fandokoana fluorocarbon miorina amin'ny PVDF 15-20
2 Fiantohana fiantohana - - 15-20 yrs
3 Gloss @ diplaoma 60 % ASTM D 523 20-80
4 Formability (T-Bend) T ASTM D1737-62 2T, tsy misy triatra
5 Fiatraikany- familiana - NCCA II-5 Tsy misy safidy
6 Hamafin'ny-pensilihazo min ASTM D3363 Min.f
7 Adhesion Rano lena mando - ASTM D3359, fomba 8 37.8 ° C, 24 ora. 100 ° C, 20 min. Tsy mifidy Tsy mifidy Tsy mifidy
8 Fanoherana mahery vaika litatra / Mil ASTM D968-93 (fasika latsaka) 40
9 Fanoherana ny simika - ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 AAMA2605 ASTM D2248-93 Tsy misy fiovana
10% HCL (15 minitra fitsapana toerana)
20% H2SO4 72 Ora
20% NaOH 18 Ora
Mortar Pat fitsapana 24 ora
Detergent, vahaolana 3%, 38ºC, 72hrs
10 Fitsapana toetrandro-o-metatra - Max. Fitaovana 5 aorian'ny 10 taona
Fitanana loko ASTM D2244-93 Min 50% aorian'ny 10 taona
Fitanana gloss ASTM D523-89 Max. Fitaovana 8 ho an'ny loko & 6 ho an'ny
Fanoherana ny tsaoka Fotsy rehefa afaka 10 taona
11 Fanoherana famafazana sira hrs ASTM B117-90 Blister-10, mpanoratra-8, aorian'ny 4000
ora: zavona masira 35 ° C
12 Fanoherana ny hamandoana hrs ASTM D2247-94 Tsy misy blaogy aorian'ny 4000 ora, 100% RH, 38 ° C
Alucosun SOLID® dia andrana mifanaraka amin'ny EN13501 dia sokajina ao amin'ny kilasy A1 izay vokatra tsy mora may. Amin'ny fanajana ny kaody fiarovana ny ain'ny NFPA sy ny manampahefana isan-karazany mifehy ny famahanana tsy azo dorana dia avela amin'ny karazana trano rehetra tsy misy fetra. Amin'io lafiny io, AlucosunSOLID ®miaraka amin'ny kilasy A1 dia azo apetraka amin'ny tranobe misy karazany sy haavony.
Item fanandramana Result
EN13501-1 Kilasy A1
Ny aliminioma dia raisina ho toy ny vy indostrialy voaverina indrindra; afaka amin'ny fikaohin'ny vy mavesatra izy io. Ny aliminioma dia azo averina alamina raha tsy miovaova ny kalitaony. Ny alimika voaverina dia tsy azo avahana amin'ny alimina virijina, ny dingana tsy mamokatra fiovana amin'ny metaly, noho izany ny aliminioma dia azo averina mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ny famerenana amin'ny alimina alimina dia mitahiry 95% amin'ny vidin'ny angovo amin'ny fikarakarana alimina vaovao.
Ireo pigmen ampiasaina amin'ny rafitra loko mandritra ny famokarana Alucosun Solid ®tsy atahorana. Raha manarona ny tontonana matevina ny teknolojia ampiasaina amin'ny fanodinana izay mamela ireo solvents navoakan'ny loko dia may ary averina miverina amin'ny fizotrany.
COLORS sy FINISHES
Alucosun SOLID®Vita amin'ny alàlan'ny rafitra PVDF sy Nano ny loko amin'ny fizarana coil coil maharitra izay miantoka ny kalitao sy ny tsy fiovaovana mifanaraka amin'ny famaritana AAMA 2605. Solid Colours dia palitao roa (26 +/- 1 µm) raha ny metaly dia palitao telo (3) (32 +/- 1 µm).
Ny rafitra fandokoana izay misy resinina PVDF 70% farafahakeliny dia fantatra amin'ny fanoherana ny tara-pahazavana UV sy ny fiantraikan'ny tontolo iainana, noho izany Alucosun SOLID ® dia fahombiazana maharitra sy tsy miovaova amin'ny toe-piainana mahery.
Ny rafitra dia manome topcoat mazava fanampiny miaraka amin'ny sombintsombiny Nano mifamatotra amin'ny faran'ny PVDF; izay miantoka malamalama ambonin`ny. Malalaka sy madio ny endrika mahatonga ny loto sy ny vovoka hifikitra aminy izay manome endrika madio hatrany ny trano. Nano PVDF dia rafitra fanadiovan-tena.
PVDF sy NANO
Ny rafitra fandokoana dia maharitra maharitra 15-20 taona.
Ny panels misy safidy isan-karazany vita dia hita ao amin'ny Alucosun SOLID ® na izany aza dia iharan'ny famerana fotoana sy habe sasany. Voaaro voajanahary amin'ny tontolon'ny SOLID sosona tsy miovaova dia mahatohitra mateza mafy dia maharitra manome 30 taona eo ho eo.
Ny teknika mahazatra sy ankehitriny rehetra hametrahana ny Facades dia azo raisina amin'ny fametrahana takelaka SOLID. Safidy misimisy kokoa momba ny fanamboarana miafina no mahasamihafa azy amin'ny vokatra mitambatra mifangaro. Izay endrika marokoroko, volo, zorony, firakofana an-tsanganana, malefaka, lamba hafa sns dia azo amboarina sy hapetraka mora foana. Mba hahazoana fanitarana hafanana mitovy amin'izany dia asaina mampiasa sub-rafitra vita amin'ny aliminioma. Manolo-kevitra ny hampiasa takelaka amin'ny fampiasana tokana sy fitarihana fanamiana ho an'ny famaranana tena tsara.
Alucosun SOLID® dia novokarina tamin'ny sosona lacquer manify eo amin'ny ilany aoriana mba hahazoana antoka ny fifamatorana mafy amin'ny adhesives noho izany dia azo ampifandraisina mivantana amin'ilay substructure izy io nefa tsy misy fametahana hita maso.
Ny tontonana amin'ny hatevin'ny 3 mm ary ambony dia azo antoka ny manamboatra (ISO 14555: 2017) miaraka amina baoritra ao ambadiky ny tontonana ho an'ny fanamboarana miafina. Ny firaka 3003 sy 5005 ampiasaina amin'ny tontonana dia tsara amin'ny tanjon'ny welding. Ny fametahana amin'ny sisiny aoriana an'ny Panel miaraka amin'ny 3 mm sy ambony dia tsy hisy akony amin'ny velarana vita.
Alucosun ® fiaraha-miasan'ny Wis om Metal Composites Ltd izay mamokatra vokatra farany miaraka amin'ny toeram-pamokarana malaza any Jiangsu, manodidina ny roa volana eo ho eo izay manana traikefa manan-danja amin'ny Indostrian'ny Panel Aluminium.
Alucosun ®marika iray izay manome ny filan'ny tontolon'ny arsitektorianao rehetra, na Facade, Roof, Ceiling, Advertising, Identite Corporate. Fitaovana miaraka amin'ny trano anatiny rehetra mba hiantohana ny vokatra sy ny fanoloran-tena amin'ny kalitao.
Manolotra vokatra tsara indrindra izahay amin'ny ultim a teperfection; tratry ny fifangaroana tsara indrindra an'ny manam-pahaizana momba ny indostria, ny haitao farany ary ny milina be pitsiny.
Fotodrafitra napetraka hamokarana mihoatra ny 10 tapitrisa M2 isan-taona, miaraka amin'ny zavamaniry telo (3) ho an'ny Production Production isan-karazany, ny lokon'ny loko miaraka amin'ny laboratoara anatiny.
Alucosun ®miasa manerana an'i Atsinanana, Moyen Orient, Eoropa ary Amerika. Ny biraom-paritra, ny mpiara-miasa aminay, ny maso ivoho ary ny mpaninjara manerana ny faritra dia ahafahanay mahafeno ny fepetra takianareo amin'ny fitaovan'ny arafisinay sy ny serivisy fanohanana na aiza na aiza ilainao izany.
Panel matevina aluminium 2mm
Panel vita amin'ny vy matevina
PANELAM-PANORANA ALUMINIMA (HIDITRA)